Photocall TV, safidy mahaliana hijerena DTT na aiza na aiza | Avy amin'ny Linux
Photocall TV, safidy mahaliana hijerena DTT na aiza na aiza
Joaquin Garcia Cobo | | fampiharana, GNU / Linux, Tutorials / Manuals / Tips
Taorian'ny krizy COVID-19, nitombo be ny fampiasana sy ny fihinanana fialamboly an-tserasera. Ny fiakarana dia toy izany fa maro amin'ireo orinasan'asa ireo no voatery nampitombo ny loharanom-pahalalan'ireo mpizara azy ireo ary nampihena ny kalitaon'ny fandefasana ny atiny. Izay toa anekotera tsotra izao dia lasa fironana mitohy mitombo. Serivisy manasongadina toy ny Photocall TV na Pluto TV, ankoatry ny hafa.
Ny fahitalavitra an-tserasera no vokatra kintana amin'ny fialamboly nomerika, manasongadina ireo serivisy fandefasana sarimihetsika mivantana, saingy tsy izy ireo ihany. Tao anatin'izay volana lasa izay, ny fampiasana rindranasa sy rindran-tranonkala izay misy manolora DTT sy fantsona tsy miankina amin'ny Internet maimaim-poana, matetika. Ary na dia maro aminareo aza no hiteny fa mitovy amin'ny atolotry ny Televiziona antsika, ny marina dia mamela antsika ireo serivisy ireo jereo ny atiny amin'ny fitaovana rehetra ary manampy antsika koa izany hampihena ny isan'ireo doka tafiditra ao anaty atiny.
1 Inona no atao hoe TV Photocall?
2 Inona avy ireo fantsona azoko jerena amin'ny fahitalavitra Photocall?
2.3 iray hafa
3 Ahoana ny fiasan'ny Photocall TV
3.3 Ahoana ny fomba firaketana ireo programa
4 Ahoana ny fomba fahitana ny fahitalavitra Photocall amin'ny fahitalavitra
4.3 Vata fahitalavitra
4.5 Solosaina maimaim-poana amin'ny fahitalavitra Photocall
4.9 eFilm sy Fampiharana TV
Inona no atao hoe TV Photocall?
Tao anatin'izay volana lasa izay, fampiharana maro no noforonina hijerena maimaimpoana ny DTT sy fantsona hafa, saingy indrisy tsy ireo fampiharana rehetra ireo no manana fiainana lava na miasa tsara izy ireo. Na izany aza, mandeha tsara ny fampiharana Photocall TV, efa manana fiainana lehibe. Fahitalavitra Photocall dia serivisy fahitalavitra mandeha ara-dalàna sy maimaim-poana izay mandefa fantsona DTT misokatra.
Photocall TV koa dia nanisy andiana serivisy izay mihoatra ny fijerena sarimihetsika, andian-tantara na programa amin'ny fiteny samihafa. Ankoatra ny fahitana ny DTT amin'ny fitaovana samihafa dia mamela antsika ny Photocall TV mihaino fantsona radio amin'ny alàlan'ny streaming, Fantsona DTT iraisam-pirenena, Fantsona DTT manam-pahaizana manokana amin'ny lohahevitra samihafa, iray Torolàlana amin'ny fahita lavitra miaraka amin'ny programa sy ny fandaharam-potoanany ary compendium serivisy VPN hahafahana mijery na ao anatin'ny firenena niavian'ny fantsona na avy amin'ny firenena hafa.
Photocall TV dia manana kinova tranonkala sy fampiharana ho an'ny Android, amin'izao fotoana izao tsy mandeha intsony ity app ity fa ny dikan-tranonkala dia mbola mifanaraka amin'ireo fitaovana. Manomboka izao, ny serivisy dia mifanaraka amin'ny fanitarana sy serivisy isan-karazany izay amin'ny finday avo lenta, takelaka, fahitalavitra hendry ary tranonkala fitetezana. Midika izany fa afaka jerentsika amin'ny fitaovana rehetra tsy misy olana mifanentana amin'ny endrika na marika manokana.
Inona avy ireo fantsona azoko jerena amin'ny fahitalavitra Photocall?
Azontsika atao izao jereo saika ny fantsona DTT rehetra any EspanaMidika izany fa afaka mahita ireo fantsona lehibe toa ny La 1, La 2, Telecinco, Antena 3, La Sexta, Cuatro, Mega, Neox, sns ... ary koa ireo fantsom-pahitalavitra isam-paritra, toa ny TV3, Telemadrid, ETB na Canal Sur, mandalo Fantsom-baovao DTT fantsom-baovao toy ny EuropaPress sy / na Fantsona DTT an'ny klioban'ny baolina kitra toy ny fantson'ny Real Madrid na ny fantson'ny FC Barcelona.
Ireo fantsona iraisam-pirenena ho hitantsika ato amin'ity fizarana ity dia fantsona avy any amin'ny firenen-kafa nandefa tamin'ny alàlan'ny DTT na an-tserasera ary avy amin'ireo no ahitantsika ireo fantsona lehibe ananan'izy ireo na fantsom-baovao. Ka, ohatra, manana ny fantsona BBC any Angletera isika, saingy tsy manana ny fantsona BBC Two, BBC Three na BBC Four. Toy izany koa no hitranga amin'ny fantsona hafa any amin'ny firenen-kafa. Mampalahelo fa afaka mahita ireo fantsona ireo amin'ny fiteny tany am-boalohany nandefasana azy ireo isika, Tsy hanana dikanteny anglisy na dikanteny aminay amin'ny Espaniôla izahay raha tsy hoe manao izany ny fantsom-baovao.
Ny fizarana "Hafa" dia misy fantsom-pahitalavitra misy lohahevitra. Ireo fantsona ireo dia nipoitra tato anatin'ny taona vitsivitsy ary mandraka ankehitriny dia natokana ho an'ny serivisy an-tariby, saingy Photocall TV dia mamela antsika hijery ireo fantsona ireo tsy andoavam-bola, na dia tsy izy rehetra aza. Samy hafa ny lohahevitr'ireo fantsona ireo, manomboka amin'ny fantsona manana lohahevitra ara-tantara ka hatrany amin'ny fantsom-pampianarana misy ao an-trano, amin'ny alàlan'ny fantsom-pako any an-dakozia na fantsom-panaon'ny ankizy sy tanora Ho fanampin'izay, ny Photocall TV dia tsy manangona fantsona isaky ny lohahevitra fotsiny fa manangona ireo fantsona malaza indrindra amin'ity lohahevitra ity na ireo fantsona DTT an'io lohahevitra io.
Nandritra ny taona maro dia nandefa ny fandaharan'izy ireo tamin'ny alàlan'ny Internet ireo onjam-peo lehibe. Amin'io lafiny io, ny Photocall TV dia tsy manavao, fa azontsika atao ny mandinika izany Ny fizarana fahitalavitra Photocall dia karazana lahatahiry radio izay mandeha amin'ny Internet. Misy zavatra ilaina raha te hanova onjam-peo isika ary te hanao azy haingana.
Ahoana ny fiasan'ny Photocall TV
Ny fiasan'ny Photocall TV dia tsotra, angamba zavatra tsara io fampiharana io. Isaky ny fizarana dia misy ny sary masina miaraka amin'ny fango isaky ny fantson'ny DTT. Tsindrio io dia hitarika antsika amin'ny fampielezam-peo. Ny kalitaon'ny fampielezam-peo dia miovaova arakaraka ny fantsona, fa raha tsy manana fifandraisana ratsy izahay, ny zavatra mahazatra dia ny mahita ireo fandaharana nalefa tamin'ny vahaolana 720 na 1080. Raha te hiverina amin'ny lisitry ny fantsona isika dia tsy maintsy manery fotsiny ny bokotra miverina amin'ny tranokala na ny fampiharana ary amin'izany dia hiverina amin'ny lisitry ny fantsona isika. Raha te hivoaka isika dia mila manidy ny vakizan'ny tranonkala fotsiny.
Mora dia tsotra ny fametrahana ny Photocall TV, mila manokatra ny tranokalan'ny fitaovana fotsiny isika ary mankamin'ny manaraka adiresy tranonkala. Mampalahelo fa tsy mandeha intsony ny rindranasa Android ka io ihany no hany safidy hidirana amin'ny serivisy Photocall TV.
Ahoana ny fomba firaketana ireo programa
Photocall TV dia miasa amin'ny alàlan'ny tranokala ary mamela antsika hanana fiasa fanampiny izay tsy azon'ny rindranasa hafa na tsy ananany. Amin'ity tranga ity dia afaka isika firaketana ireo programa izay alefa amin'ny alàlan'ny Photocall TV noho ny plugin iray Chrome antsoina hoe Stream Recorder - ampidino ny HLS ho MP4. Manampy bokotra ity plugin ity firaketana anaty tranonkala. Manomboka ny fandefasana ny programa izahay ary aorian'izay dia tsindrio ny bokotra fandraisam-peo ary hanomboka ny firaketana ny programa izay alefa. Raha vantany vao vita ny fisie dia ho voatahiry ao amin'ny antontan-taratasintsika na amin'ny toerana izay natoronay ny "Fikirakira" ny fanampiana.
Ahoana ny fomba fahitana ny fahitalavitra Photocall amin'ny fahitalavitra
Na dia fampiharana Internet aza ny Photocall TV dia tsy midika izany fa tsy afaka mampiasa azy io amin'ny fitaovana samihafa isika. Manaraka izany dia holazainay aminao ny fomba ahafahantsika mampiasa Photocall TV amin'ny gadget samihafa mifandraika amin'ny fahita lavitra, raha tsy jerena ny finday avo lenta, takelaka ary pc, izay azontsika idirana amin'ny tranokala araka ny efa nambarantsika tetsy ambony.
Ny fitaovana Google ho an'ny fahitalavitra dia miasa tanteraka amin'ny Photocall TV, mba hampandeha azy tsara tsy maintsy mandefa amin'ny tranokalan'ny tranokala izahay ary mirror amin'ny fandefasana ny fitaovana Chromecast, izany hoe mandefa ny atiny amin'ny gadget isika. Ny hany olana amin'ity fampiasana ity dia ny fahazoantsika antoka fa mampiasa Google Chrome, Chromium na derivatives isika. Ity dingana ity tsy mifanaraka amin'ny Mozilla FirefoxAmin'ny fitsipika, noho izany dia mila manova ny fitetezana isika amin'ny tranga toy izany na misafidy ny hampiasa add-on izay ahafahantsika mijery mirrorcast eo anelanelan'ny browser sy ny chromecast. Raha tsy manana solosaina isika ary amin'ny alàlan'ny tablette na smartphone dia ataontsika amin'ny alàlan'ity fitaovana ity ary mariho ny chromecast ho teboka fandraisana.
Raha te-hilalao ny atiny amin'ny fitaovana fahitalavitra Amazon isika dia afaka manao azy amin'ny fomba roa. Ny voalohany dia mampiasa ny gadget toy ny chromecast ary avy eo amin'ny alàlan'ny fampiharana casting dia alefaso amin'ny Fire TV ny atiny TV Photocall. Betsaka ny rindranasa mamela antsika hi-mirrorcast eo amin'ny pc, smartphone na tablette-nay ary ny FireTV toa ny Screen Mirroring na SendtoScreen for Fire TV.
Misy modely na gadget misy boaty na minipcs samihafa izay mifandray amin'ny fahitalavitra na monitor ary afaka mandefa programa na serivisy fahitalavitra na / na mozika. Photocall TV manohana azy rehetra. Ho an'ny fahafinaretana, toy ny amin'ny Fire TV, azontsika atao amin'ny alàlan'ny browser web izany. Ny ankamaroan'ireto minipcs ireto misy Android ho rafitra fiasa ka na mampiasa ny tranokala na afaka manao izany isika mampiasa fampiharana mirrorcasting toy ny amin'ny Fire TV.
Ny fitaovana Apple dia tsy nanana fampiharana Photocall TV tany am-boalohany, saingy satria tsy mandeha izy io ankehitriny, ny fitaovana Apple dia mitovy lenta amin'ireo fitaovana Android, noho izany dia mila mampiasa ny tranokala fitetezam-boky izahay hilalao ny atiny. ny modely farany amin'ity gadget Apple ity dia mamela ny fifandraisana amin'ny iPhone afaka milalao avy amin'ny finday avo lenta isika ary mandefa amin'ny Apple TV na afaka milalao avy amin'ny Apple TV isika ary mampiasa ny iPhone ho fanaraha-maso lavitra. Izay tianao.
Solosaina maimaim-poana amin'ny fahitalavitra Photocall
Araka ny efa nolazainay tany am-piandohana, ny fialamboly an-tserasera dia nitombo tato anatin'ny volana vitsivitsy ary nahatonga ny fahitalavitra Photocall tsy vitan'ny fahombiazana fa koa tolotra hafa dia mahomby tokoa ary ampiasain'ny olona an'arivony. Ireto misy sasany ny safidy hafa izay tokony hampiasaina fa tsy Photocall TV:
Ity serivisy ity dia iray amin'ireo malaza indrindra satria manolotra rindrambaiko ho an'ny Android sy Apple TV izy ary, toa ny Photocall TV, manolotra azy maimaim-poana. Na izany aza, manana olana amin'ny Photocall TV izy ary io no izy Pluto TV dia tsy manome afa-tsy fantsona fahitalavitra iray miaraka amina fantsona misy lohahevitra maromaroSaingy tsy manolotra atiny iraisam-pirenena na fidirana amin'ny radio. Ny teboka tsara dia hoe raha mifanaraka amin'ny iOS sy ny fitaovany izy dia manana rindrambaiko iray ahafahantsika mijery ny atiny.
Nandritra ny fotoana fohy izao, mpampiasa Gnu / Linux dia manana safidy tena mahaliana izay nanjary tsy safidy hafa amin'ny Photocall TV fa koa mifaninana amin'ny Netflix mihitsy amin'ny sehatra rehetra. Antsoina hoe Plex ity serivisy ity.
Plex dia serivisy sy rindrambaiko napetraka amin'ny mpizara anao manokana ary izany dia miaraka amin'ny tombony azontsika atao mahazo netflix manokana izay afaka mandefa fantsom-pahitalavitra sy DTT, antsika manokana sy manokana. Ny olana amin'ity rafitra ity dia mila manana mpizara tsy miankina izay mety ho solo-saintsika na minipc tsotra.
Ny mety hitranga mijery fantsona DTT an-tserasera amin'ny alàlan'ny lisitry IPTV. Ireo playlists ireo dia toy ny playlist Spotify. Ny lafy ratsy dia ny fahita matetika ary Miova matetika ny adiresy IP Channel ary avy eo mijanona tsy mandeha intsony ny fantsona ampiana amin'ireo lisitra ireo. Ny teboka tsara dia ny fahafahantsika mampiasa ireo lisitra ireo amin'ny fitaovana rehetra satria mpilalao marobe, na ho an'ny Android na ho an'ny iOS, no mifanaraka amin'izy ireo. Na ireo seho malaza aza VLC y Kodi manana safidy hilalao ireo lisitry ny fahitalavitra ireo.
eFilm sy Fampiharana TV
Misy ny fahafahana manao serivisy Photocall TV amin'ny tanana, izany hoe mandeha amin'ny tranokalan'ny fantsona fahitalavitra tsirairay izahay ary mijery azy na ampidininay ny rindranasa ofisialy ary alainay sary an-tsaina amin'izany. Ny teboka ratsy an'io dia mila mametraka isika fampiharana mihoatra ny 100 raha te hanana hitovy amin'ny Photocall TV isika, tsy manadino ireo olana ara-piarovana mety hanjo antsika amin'izany. Ny teboka tsara dia ny hijerentsika ilay fantsona amin'ny kalitao avo lenta ary amin'ny fotoana maro dia ho afaka hijery ilay programa isika isaky ny mila izany. Ny serivisy ho an'ny famakiana ho an'ny daholobe an'ny governemanta Espana dia efa amam-bolana maro serivisy an-tserasera sy serivisy fampindramambola andiany maimaimpoana. Antsoina ny serivisy eFilm. Ity serivisy ity dia tafiditra ao eBiblio ary manolotra antsika katalaogin-tsarimihetsika, horonantsary fanadihadiana ary andian-dahatsoratra marobe, saingy tsy maintsy manana fidirana amin'ny eBiblio isika. Ny zavatra tsara momba ity serivisy ity dia manana atiny tsy misy doka amin'ny fitaovana rehetra izahay. Ny zavatra ratsy momba azy dia hoe hanana azy io mandritra ny 7 andro isika ary avy eo dia mila manavao isika raha te hahita azy io indray. Ankoatr'izay, lmatetika tsy dia tsara loatra ny fampiharana finday na dia misy aza izy ireo na ho an'ny Android na ho an'ny iOS.
Nandritra ny fotoana lava be, na dia talohan'ny krizy COVID19 aza dia nampiasa serivisy fahitalavitra nomerika na fahitalavitra tamin'ny alàlan'ny streaming. Toa fandrosoana lehibe ho ahy izany ary Hitako fa mahasoa kokoa azy ireo noho ny fampiasana ireo fantsom-pahitalavitra, satria ankoatry ny zavatra hafa no itehirizanao ny doka. Fa ho fanampin'izany, ireo serivisy ireo dia mamela anao hanana fidirana amin'ny programa izay tsy ho azonao aleha, toy ny fantsona misy lohahevitra na fantsona iraisam-pirenena. Mampalahelo fa ho an'ny ankamaroan'ireo serivisy ireo dia misy ifandraisany amin'ny rindranasa hacker na fampiharana tsy ara-dalàna ary sady tsy iray no tsy hafa. Farafaharatsiny ao amin'ny fahitalavitra Photocall sy izay efa nanandramako. Ny tena tiako indrindra momba ny Photocall TV dia ny fampihenana ny atiny ao pejy web telo fotsiny. Toy ny hoe lahatahiry amin'ny fahitalavitra ary miasa tsara daholo izy rehetra, tsy hahita lesoka amin'ny atiny diso ianao na tsy misy, raha tsy hoe miasa ratsy ny tranonkala satria be loatra ny mpampiasa azy, izay mitranga indraindray.
Amin'izany rehetra izany dia manolo-kevitra anao aho hampiasa ity serivisy ity ho fanampin'izany, miaraka amin'ny toetr'andro sy fialantsasatra tsara izao Photocall TV dia safidy tsara tsy hasiana fahitalavitraTakelaka finday na smartphone fotsiny no ilainay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Photocall TV, safidy mahaliana hijerena DTT na aiza na aiza
JUAN REYES GUERRERO dia hoy izy:
Lahatsoratra tena tsara. Enga anie ka efa nahita an'io teo aloha aho dia tiako… indrindra fa tamin'ny fiadiana ny amboara amerikana ny lalao. Tiako ity tranonkala ity.
Famihinana avy any Kolombia
Valio amin'i JUAN REYES GUERRERO
Joaquin Garcia Cobo dia hoy izy:
Misaotra betsaka anao namaky anay. Faly aho fa hitanao fa nahasoa azy na dia tara aza aho, nefa, tsy hijanona ny fiadiana ny amboaran'i Amerika, azonao ampiasaina amin'ny manaraka izany. Mirary ny soa indrindra!!!
Valiny tamin'i Joaquin García Cobo
Juan Reyes Guerrero avy any Elizondo dia hoy izy:
Misaotra anao mamaly… Mitsidika ny bilaogy aho hatramin'ny nanombohako tamin'ny Ubuntu 14.04
Valiny tamin'i Juan Reyes Guerrero avy any Elizondo
Matetika aho mampiasa ilay programa mitondra ny distro linux mint tiako indrindra dia antsoina hoe Hypnotix, tiako ity karazana fampianarana ity, misaotra betsaka noho ny nanaovanao azy, namela anao tendrony tamina valisoa feno herim-po aho antenaiko fa nahatratra anao ^^
Mamaly an'i richo
CBL-Mariner, fizarana Linux an'ny Microsoft dia mahatratra ny andiany 1.0
Ny faharefoana ao amin'ny Coursera API dia mety hamela ny famoahana ny angon-drakitra mpampiasa